Dealer Signature Tracker: softiweer ganacsadaha raadraaca ee softiweer!
Miyuu ganacsadaha gacantiisa runti saameyn ku leeyahay lambarka guuleysta ee roulette? Haddii aysan run ahaantii saameyn ku yeelan natiijooyinka, markaa muxuu ganacsaduhu u beddelaa 30 daqiiqo kasta ama sidaas oo kale khadka tooska ah ee tooska ah? La soco Dealer Signature Tracker!
Hordhaca Dealer Signature Tracker
Waa maxay waxani Dealer Signature Tracker? Waa aalad ciyaarta ciyaarta oo kuu oggolaaneysa inaad la socoto oo aad falanqeyso duubista croupier-ka xagga aragtida joomatari ahaan.
Asal ahaan raadraacahan asalka ah waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto joogitaan aan si gaar ah uga ahayn dhinaca aragtida tirooyinka (daahitaanka, isdabajoogga, iwm.), Laakiin halkii aad ka hoos mari lahayd muuqaal muuqaal cusub, oo ku xiran abuurista qaabab joomatari ah.
Kahor intaadan sii wadin aqrinta waxaan kugula talinayaa inaadan ciyaarin roulettes-ka softiweerka, maxaa yeelay waa la qiyaasi karaa si ciyaaryahanka uu u lumiyo wax ka badan 2,7% canshuurta laga filayo roulette-ka dhabta ah.
Masaafada on roulette
Fikradda asalka ah ee qaabkani waxay dib ugu laabanaysaa qaab aan muddo dheer ka hor ka akhriyay barta laroulette.it, halkaas oo ciyaartoy, oo magaciisu yahay Gimbo, uu ku tilmaamay qaab ciyaareedkiisa: lambar kasta wuxuu u dhigmaa meel roulette ee aan raacin.wax amar macquul ah, laga bilaabo eber, saacad ahaan waxaan kaheleynaa lambarka 32 ee booska 1, 15 ee booska 2 iyo wixii lamid ah ilaa 26 ee booska 36.
Taas bedelkeeda, haddii aan tirino tirada boosaska saacad-diimeed, waxaan haysannaa in 26 ay ku jirto booska 1 iyo 32 booska (masaafada) 36.
Masaafada jidh ahaaneed ee udhaxeysa laba nambar roulette ayaa sidaas darteed ah natiijada tirinta tirada sanduuqyada kala soocaya.
Masaafadaani waxay u dhaxeysaa 0 (markay kala soocayso tiro isku mid ah laba jeer ama ka badan), ilaa ugu badnaan 36.
Kooxaha ku jira Dealer Signature Tracker
Ma jiraan lix, dersin ama iskudhafyo kale, qiimaha tixraaca kaliya waa masaafada.
Masaafada waxaa lagu taxay kooxo ka kooban lix lambar oo isku xiga gawaarida oo loo qeybiyay sida soo socota:
Kooxda +1: masaafada u dhexeysa 1 ilaa 6
Kooxda +2: masaafada u dhexeysa 7 ilaa 12
Kooxda +3: masaafada u dhexeysa 13 ilaa 18
Kooxda -1: masaafooyinka laga bilaabo 19 illaa 24
Kooxda -2: masaafooyinka laga bilaabo 25 illaa 30
Kooxda -3: masaafooyinka laga bilaabo 31 illaa 36
Fogaanta 0 (marka lambar hadda la soo celiyey la soo celiyo) waxay u dhigantaa kooxda 0, taas oo, si kastaba ha noqotee, ku sameysmo si ficil ah oo keliya, aan la barbardhigi karin kooxihii hore.
Mawqifka kooxaha masaafada aan la hagaajin, laakiin uu wareegayo iyadoo lagu saleynayo lambarka ugu dambeeya ee la soo saaray, sidoo kale booska saxda ah ee lambarka silsiladda lama tixgelinayo, laakiin kooxda u dhiganta masaafada u dhaxeysa laba lambar.
Si sax ah loo go'aamiyo koox markaa waxaa lagama maarmaan ah in la xisaabiyo booska u dhigma wareejin kasta, hawlgal ay la macaamili doonaan softiweerka si fiican loo sharraxay goor dambe.
Jaantuska ku jira Dealer Signature Tracker
Qeybinta masaafada ee wanaagga iyo xumaanta ayaa wax badan inaga caawineysa wajiga matalaada garaafka ee joogitaanka, xaqiiqdii iyadoo la adeegsanayo garaafka laba-geesoodka ah ee muuqaalka ee 'XY graph', waxaan lahaan doonnaa in abscissa (X axis) uu matalayo noocyada kala duwan (wareegga) iyo maamulaha (Y axis) kooxaha kala duwan.
Qorshaynta garaafka masaafada meeshan runti way fududaanaysaa: wareejin kasta kooxda u dhiganta waxaa lagu baarayaa dhidibka Y iyadoo sortie lagu calaamadeeyay dhibic.
Ka dib waxaad ku biiri kartaa qodobbada kala duwan xariiq kadibna waxaan heli doonnaa jaantus garaaf ah oo ku saabsan isbeddelka masaafada ee kalfadhiga ganacsade aan kormeerayno.
Sidaa darteed kalfadhi kasta waxaa lagu qoraa garaaf ahaan waana iyadoo la falanqeeyo jaantusyada la soo saaray waxaad isku dayi kartaa inaad tarjunto, ama aad isku daydo inaad raadiso qaabab, fikrad si fiican loo muujin doono hadhow, taasi waa xaaladaha ama dabeecadaha si uun loogu aqoonsan karo ka faa'iideysiga iyo ciyaar.
Isticmaalka Dealer Signature Tracker
Marka koodhka furaha la galo, labada badhan ee 'Easy' iyo 'Pro' ee ku jira daaqadda barnaamijka ayaa dhaqaaqaya.
Nooc fudud: Kani waa nooca barnaamijka oo keliya hal garaaf oo raadraac ah loo adeegsado, ficil ahaan labadaba saacadba saacadaha iyo bilawga saacadaha ayaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal muuqaal oo muuqaal ah.
Nooca Pro: waa nooca garaafka laba-geesoodka ah leh, midna saacadaha wareegga ah iyo midka saacadaha ka soo hor jeeda, oo wata tirakoob iyo keyd toos ah.
Hababka kala duwan ee loo adeegsado nooca Pro-ka ayaa dhammaantood lagu sharxay goor dambe qaybta 'DSTracker Method'.
Dealer Signature Tracker Nooc fudud
Sidaan horeyba u soo sheegnay, isticmaalka barnaamijku runtii waa wax fudud oo macquul ah, si kastaba ha noqotee liistada shaqooyinka ugu waawayn waa lama huraan: ugu horreyntii, kaliya ka wareeji dulqabka jiirka kumbuyuutar kasta furaha barnaamijka si aad u aragto sharaxaad kooban oo u dhiganta shaqada muuqan.
Kaliya bilowga kulankeena ciyaarta waa inaan galnaa nambarada 2 ee ugu dambeeya sanduuqyada 'Last 2 Spins', ka dibna kaliya gali lambarka hadda galay qeybta koowaad qeybta kore waxayna kuxirantahay jihada bilowga (CW = Clockwise CC = Waqtiga dambe) ee wareegga xiga, dhagsii 'CW' ama 'CC'.
Bilow kasta ka dib sidaas darteed waa lagama maarmaan in la galo lambarka qaybta sare oo guji 'Record'.
Hada laga bilaabo waxay noqon doontaa barnaamijka si toos ah si looga beddelo CW loona beddelo CC oo waxaan kaliya u baahan doonnaa inaan galno arrintii ugu dambaysay ee guddiga oo guji badhanka diiwaanka.
Adoo gujinaya badhanka Record, qaybta 'Last #' lambarka la soo saaray si otomaatig ah ayaa loo gelinayaa (haddii qalad dhaco weli suurtagal ayey noqon doontaa in gacanta lagu beddelo lambarka) sidaa darteedna waa inaan gujineynaa guddiga masaafada si loo doorto masaafada aan rabno inaan higsanno oo aan gujino badhanka Muuji Nambarada Sharadka (waxay muujineysaa lambarro lagu sharaddeeyo).
Adoo gujinaya badhanka leh muraayadda weyneysa, waxaan sidoo kale awood u yeelan doonnaa inaan aragno halka ay lambarada ku diyaarsan yihiin shaagagga, si aan si fiican ugula soconno hoos u dhaca kubbadda sanduuqa guuleysta.
Si garaafku u soo muuqdo, kaliya dhagsii shaashadda roulette, oo isla markiiba baaba'aysa.
Kani waa garaaf garaafka uu soo saaray Croupier, maskaxda ku hay in qaabka fudfudud ee dhibic kasta si iskiis ah ay u taagan tahay saacad iyo wareeg saacad-diidka ah.
Midigta garaafka waxaad ka heli doontaa, laga bilaabo kor:
liiska masaafooyinka dhoofay;
wadarta tirada masaafada ee la duubay (wareega) inta lagu gudajiro fadhiga, oo waliba u dhigma tirada dhibcaha garaafka.
Kadibna waxaa jira badhanka (casaanka X) si aad u tirtirto kaliya barta ugu dambaysa / masaafada la galay, haddii halkii aad rabto inaad tirtirto, tusaale ahaan, tobanka masaafadood ee ugu horeysa ee la galay, kaliya laba jeer guji masaafada ugu horeysa ee liiska oo ku celi hawlgalka inta jeer ee aad rabto.
Ugu dambeyntiina, hoosta waxaad ka heli doontaa fallaadhaha hagidda si aad u eegto bogagga garaafka oo ka koobnaan kara ugu badnaan 25 dhibcood boggiiba.
Kaliya qaabka fudud, mahadnaqa garaafka labaad ee kuyaala hoosta, waxaa suurtagal ah in la raro lana barbardhigo kalfadhi hore loo badbaadiyey (sida iska cad Croupier laftiisa), si loo raadiyo isku mid ahaanshaha.
Sidaa darteed garaafkan labaad la tashi kaliya, sidaa darteed waxaad awoodi doontaa oo kaliya inaad u rogto bogagga horay / gadaal.
Golaha: haddii aad leedahay kal-fadhiyo dhowr ah oo isla Croupier ah, samee hal feyl (kaliya nuqul / dhaji faylasha qoraalka ee kala duwan) oo u isticmaal barnaamijka adigoo u rogaya bogagga si aad u hesho midka ugu dhow muuqaal ahaan kalfadhiga hadda jira.
Ugu dambeyntiina, sida si fudud loo fahmi karo, badhannada waxaa loo adeegsadaa si:
muujiyo / qariyo guddiga tirakoobka iyo maaraynta kalfadhiga;
u gudub muuqaalka muuqaalka Pro;
tirtir dhammaan xogta (masaafada iyo garaafka) fadhiga hadda socda.
Maareynta Fadhiga (Si fudud)
Maareynta kal-fadhiga wuxuu u qaybsan yahay: Kalfadhiga Hada (fadhiga oo socda) e Fadhiga Badbaadsan (kalfadhigii waa la keydiyay).
Kalfadhiga Hada: badhamada waxaa loo isticmaalaa in lagu raro kalfadhi la keydiyay, si loo keydiyo loona keydiyo sawirka garaafka la tashiga mustaqbalka.
Dhammaan fadhiyada waxaa lagu keydiyaa faylalka qoraalka (txt) oo barnaamij kasta wax ka beddeli kara.
Waxa kale oo suurtogal ah in la galo labada magaca goobta aan ku ciyaareyno, iyo magaca Croupier, oo labaduba ku jiri doona magaca feylka aan keydinno / xamuulno marka lagu daro taariikhda / waqtiga uu barnaamijku ogaado. laga bilaabo saacadda kombuyuutarkayaga.
Fadhiga Badbaadsan: si aan ula tashanno garaaf / kalfadhi hore oo isla isla Croupier ah oo aan qorsheyneyno, waxaa suurtagal ah in la rakibo kulan la keydiyay, kaasoo lagu soo bandhigi doono shaxanka hoose sidaan horay u aragnay.
Waxaan idin xusuusinayaa in ikhtiyaarkan lagu heli karo oo keliya nooca fudud, sida nooca Pro, sida aad arki doontaan, qeybta hoose ee barnaamijka waxaa kujira shaxda wareega Spin-ka saacadda, laakiin halkaan, sidaad ogtahay, ee shaxda kaliya waxaan leenahay wareegyo saacad iyo kan saacad wareega ah.
Gudiga tirakoobka (Si fudud)
Noocyada 'Easy' oo keliya tirakoobka caadiga ah ayaa la bixiyaa, yacni inta jeer (oo lagu muujiyey labadaba tiro iyo boqolleyba), dib u dhaca hadda (Dib-u-dhaca), dib-u-dhaca ugu sarreeya (MAXD) iyo CI
CI = tusmada ku habboonaanta.
Tusmada ku habboonaanta waa halbeeg tirakoob oo mataleysa ku habboonaanta tirakoobka ee dhacdo waxaana lagu xisaabiyaa qaacido adeegsata inta jeer ee ay dhacdo iyo dib u dhaca ay hadda ku timid.
Kordhinta tusmada ku habboonaanta ee ka sarreysa 1, waxay u badan tahay inay noqon doonto isku aadka xiga.
Marka CI uu ka weynaado ama u dhigmo 1, midabka aagga la xiriira wuxuu isu beddelayaa casaan si loo muujiyo itimaalka weyn ee sortie.
CI waa halbeeg tirakoob ahaan, Tilmaamahan waa in la adeegsadaa oo keliya haddii aadan hubin masaafada loo jiheysan karo, xaaladdan oo ah CI ka weyn hal masaafo marka la barbar dhigo mid kale, ayaa naga caawin doonta inaan si dhakhso leh uga gudubno wixii go'aamo ah.
Tirakoobyadu waxay si cad u khuseeyaan kalfadhiga hadda jira (qaybta sare) iyo midka badbaadiyey (hoose) oo sida muuqata la soo bandhigi doono oo keliya haddii aan rarnay fayl hore loo kaydiyay.
Dealer Signature Tracker Nooca Pro
Nooca Pro ee barnaamijka waa midka la adeegsanayo haddii aad rabto inaad adeegsato qaar ka mid ah hababka lagu sharraxay cutubka ku habboon (Habka DSTracker) ee aad gadaal ka heli doonto.
Noocani wuu ka duwan yahay qayb ahaan qaabka fudud, markaa haddii, sidaan rajaynayo, aad horeba u sameysay tijaabooyin qaarkood nooca Easy, u beddelashada nooca Pro waa mid aad u fudud.
Aynu isla markiiba aragno kala duwanaanshaha ugu weyn: marka laga hadlayo gelitaanka, gabi ahaanba waxba isma beddelaan, dhab ahaantii kaliya geli lambarka aan aragno marka la furayo miiska ciyaarta casino, xulo jihada wareegga xiga (CW / CC) iyo ka dib markii la galo lambarka, waa inaad gujisaa badhanka halkan sidoo kale Record.
Farqiga aan isla markiiba ogaan doonno ayaa ah in marka la barbardhigo Fudud, qaybta Pro-ka barta dhibcaha diiwaangelinta masaafada la gelinayo mid kasta oo ka mid ah garaafyada 2 ee jira.
Ficil ahaan waxaan lahaan doonnaa 2 garaaf oo kaladuwan, mid kaliya oo loogu talagalay wareegga saacadda iyo mid loogu talagalay wareegga saacadaha kale.
Sababta tan waxaa si cad loogu sharxi doonaa goor dambe cutubka habka DSTracker.
Gudigani sidoo kale waa isku mid waxayna leeyihiin shaqooyin la mid ah tan nooca Easy, waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah in halkan, marka lagu daro tirooyinka u dhigma masaafada lagu sharad leeyahay, waxaan sidoo kale leenahay (isla markiiba ka hooseeya) lixda lambar ee ay leeyihiin dhab ahaan qaybta ka soo horjeedka gawaarida, haddii ay dhacdo in qof walbaa doonayo inuu tijaabiyo habab cusub ama tijaabiyo habab cusub oo sharad.
Xusuusashada kaliya dulsaar tilmaamaha jiirka badhanka kasta si aad u aragto sharaxaad kooban oo ku saabsan shaqooyinka u dhigma, aan aragno adeegsiga badhannadan oo ka bilaabanaya xagga sare: labada dabool (oo aan ku jirin nooca Easy) ayaa kuu oggolaanaya inaad xannibto gelinta dhibcaha ku jira garaafka saacad kaliya ama dhinaca ka soo horjeedka oo keliya.
Ficil ahaan bogagga qaarkood Croupiers marwalba waxay u rogaan giraangiraha hal jiho iyadoo shaqadan aan si fudud u isticmaali karno mid ka mid ah labada garaaf, haddii kale barnaamijku wuxuu gelin lahaa dhibic garaaf kasta oo kala duwan.
Badhamada kale, siday u kala muuqdaan, waxay la mid yihiin sidii horeba loogu arkay nooca Easy, kuwaas oo kala ah: show / hide statistics, u beddelasho (ku soo noqo) nooca Easy iyo (X) tirtiro dhammaan xogta kalfadhiga hadda jira.
Maareynta Fadhiga (Pro)
Guddidani waxay kuu oggolaaneysaa inaad buuxiso oo aad keydiso fadhiyada labada garaaf.
Waxaan idin xasuusinayaa in aanaan halkan ku shuban karin (sida nooca Easy ah) kalfadhiyada la keydiyay si loo barbardhigo kan hada jira, sida ku jirta barnaamijka Pro-ka ah Croupier ayaa lagu raad joogaa iyada oo aan la tixgelin kulamadii la soo dhaafay.
Samatabbixinta waxaa loo sameeyay ujeedada kaliya ee ah in markaa kadib la barto isbeddelka garaafka iyo in la fahmo wixii qalad ah ee lagu sameeyay aqoonsiga tirooyinka.
Furaha Keydinta otomaatiga ah waa suurtogal in la dejiyo kaydinta otomaatigga ah ee garaafyada iyo saacadda iyo kal-fadhiga xag-jirka ah.
Xaqiiqdii, kaliya dooro galka (haddii aad haysato Windows 7 ama ka sareeya waxaa fiican inaad ku sameysato desktop-ka) oo go'aanso inta daqiiqo ee aad kaydin lahayd; barnaamijka ku saleysan shilinta waxa aad rabto inaad kaydiso, wuxuu si toos ah shaqadiisa ugu fulin doonaa xilli kasta oo waqti hore ah oo horay loo sii dejiyey, oo ah dardaaran weyn!
Sida iska cad, sidoo kale halkan (guddigii hore) waxaad gali kartaa magaca casino iyo Croupier oo, sida ku jirta nooca fudud, lagu dhex gelin doono magaca faylka la keydiyay oo leh taariikhda qaraabada iyo waqtiga kalfadhiga la ciyaaray.
Gudiga Tirakoobka (Pro)
Gudigaan Dealer Signature Tracker waxaan helnaa dhammaan tirakoobyada caadiga ah: isdabajoogga, dib u dhaca hadda iyo dib u dhaca ugu badan iyo CI oo horeyba loogu sharaxay.
Tirakoobyadani waxay la xiriiraan kal-fadhiga hadda socda waxayna u qaybsan yihiin garaafyo saacado iyo dhinac-gees ah ka shaqeeya.
Marka lagu daro tirakoobka caadiga ah, nooca Pro-ka waxaa sidoo kale jira, qeybta xigta, tirakoobka 'Dhererka'.
Maxaa loola jeedaa 'Length'? Dhererku waa lambarka u dhexeeya hal masaafad iyo tan xigta ee garaaf kasta.
Ayadoo loo maleynayo in masaafada ay yihiin lix (+ 3 + 2 + 1-1-2-3) iyadoo la tixgelinayo in marka masaafada lagu celceliyo dhererkeedu yahay 0, waxaan leenahay haddii -3 timaado kadib -1 waxaan kor u kacnay labo jagooyinka (dhererka) iyo haddii ka dib markay 3-da yimaado -3 waxaan hoos u dhignay 5 dherer.
Ama haddii ka dib -1 yimaado +2 waxaan kor u qaadnay laba dherer.
Ficil ahaan, tirakoobkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la socoto isbeddello kasta oo Croupier gaar ah si aad u fahamto haddii uu 'doorbiday' masaafada soo degitaanka.
Falanqaynta jaantuskii hore, tusaale ahaan, waxaan si dhakhso leh u garan karaa in kormeerka Croupier uu leeyahay doorbid dhererka -1, 0 iyo -2 ee saacadaha duubista ah iyo doorbidida dhererka -1, 0 iyo -2 ee saacadaha wareega xiga. .
Anigu ma aaminsani xaqiiqda ah in qaabkan ay runti macquul tahay in la raadiyo gacanta croupier 'si cilmiyeysan', intaa waxaa sii dheer waxaan cadeynayaa in qaabkan ciyaarta, maadaama aysan jirin wax sharad ah ka dib kubbada la tuuray, aysan wax lug ah ku laheyn dhabta hababka jirka / baalistikada, laakiin si fudud anagoo u ciyaareyna qeybaha, waxaan u wareejineynaa qaabkeena ciyaarta dhanka xisaabta saafiga ah, dhanka matalaada joomatari ee joogtaynta, turjumaadan la'aanteed na siineysa faa iidooyin xisaabeed oo aad u sareyso kursiga keydka.
Aaway warkii markaa? Maxaan u qaadaneynaa qaabkan gaarka ah ee ciyaarta? Hagaag, waxaan ku bilaabayaa faahfaahinta ugu yar: ugu horreyntii dhammaan daraasaddayda hadda xaddidan, muddada dheer Croupier wuxuu soo saaraa dhammaan lixda masaafadood (+3 +2 +1 -1 -2 -3) oo ku dhow labbiska isku midka ah, sidaa darteed ma ogaan doontid (maadaama ay ku dhici karto qaab jireed) ka weecasho laxaad leh oo ka imanaya boqolkiiba heerka suurtagalnimada sortie ee 6 lambar oo ka baxsan 37 (qiyaastii 16%); marka labaad, nusqaamaha iyo dib u dhaca waxay noqon doonaan (had iyo jeer mustaqbalka fog), gabi ahaanba waxay la jaan qaadayaan kuwa sestines-ka caadiga ah ee aan u baranay inaan ku ciyaarno, marka aniga aragtidayda dhammaan tirakoobka uu barnaamijku cabbiri karo, waxaa laga yaabaa inuu qof waxtar u leeyahay kuwaas oo fikradaha cusubi la soo bixi karaan, waan ku soo daray iyaga maxaa yeelay waxa la iga codsaday wejiga qorshaynta, laakiin feker ahaanteyda ma bixin doonaan (Waxaan si cad u rajeynayaa inaan qaldanahay) tilmaam waxtar u leh istiraatiijiyadda guusha ee muddada dheer.
Awoodda dhabta ah ee habka ciyaartan, dhanka kale, waxaa lagu muujiyey kal-fadhi keliya iyo go'doon.
Ficil ahaan, adoo fiirinaya garaafyada waxoogaa wareegyo ah kadib, waxaad arki kartaa isbeddello yar yar ama qaabab yar yar oo roulette (ama Croupier) ay ku hayaan muddo hubaal xadidan, laakiin mararka qaarkood ku filan weerar faa'iido leh.
Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay in barnaamijkan loo tixgelin maayo inuu yahay qaab ciyaar durugsan, laakiin halkii marwalba uu yahay shaybaar furan oo fikradaha, halkaas oo qofkasta uu wax ku biirin karo fikradaha cusub ee ku saabsan sida loo helo natiijooyin wanaagsan oo ka wanaagsan.
Hadda oo aad baratay sida loo isticmaalo barnaamijka, aan u gudubno falanqaynta qaar ka mid ah codsiyada suurtagalka ah, oo mid ka mid ah gaar ahaan, uu duubay natiijooyin xiiso leh runtii.
Qaabka # 1: cayrsiga eber
Masaafada eberku waxay dhacdaa marka lambar lagu celiyo iyo xulashada ku habboon ee barnaamijyada, laakiin waxaas oo dhan ka sarreeya si aan loo dheellitirin muuqaalka muuqaalka garaafka ee ay soo saartay joogitaanku, masaafadaas kama diiwaan gashan barnaamijka, laakiin haddii lagu celiyo lambar ayaa soo baxa, waxaa loo tixgeliyaa si fudud sidii tallaal lumay oo isla qaybtaas ayaa lagu soo celiyaa.
Si kastaba ha noqotee, eberta aan ka hadlayo maahan tan, laakiin waa midda ay soo saartay isku darka aljebrada masaafada marka lagu daro waligeed.
Waxaan idin xusuusinayaa in qaabkan markasta oo aad farta ku fiiqdaan masaafo cayiman, koox ka kooban lix lambar oo kala duwan ay had iyo jeer u dhigmaan, marka haddii aad farta ku fiiqdaan masaafada -2 saddex jeer oo isku xigta, tirooyinku had iyo jeer way kala duwanaan doonaan, lambarka hore loo soo saaray.
Tani waxay ka dhigan tahay inay jiraan xaqiiqooyin faraqyo aad u yar oo rabshad leh marka loo eego soo noqnoqoshada masaafada kala duwan iyo wixii ka sarreeya oo dhan ee isu miisaamiddooda, iyadoo ficil ahaan marwalba la ixtiraamo xuquuqda bixitaanka qayb kasta oo ka mid ah iyo ahaanshaha wadarta aljebrada ee le eg eber (3 + 2 + 1-3-2-1 = 0), waxaan ugaarsan doonnaa wadarta eber seddex masaafo.
Aynu isla markiiba tusaale qaadanno:
Wareegyada dhabta ah ee ka diiwaangashan roulette tooska ah ee khadka tooska ah.
Habkani marka la soo koobo, wuxuu ku lug leeyahay u ciyaarista eber wadarta (haddii ay suurtagal tahay) ka dib markii laba masaafo ay soo baxeen.
Jaantuska kor ku xusan, waxaad ku ogaan doontaa in masaafada ugu horreysa ay ahayd +3, oo ay ku xigto -1, marka si loo helo wadar eber ah, waa inaan ku sharraxnaa masaafada -2 sida + 3-1-2 = 0.
Isla marka aan sugno laba masaafad kale oo aan ka baxno -2 iyo +1, si aan u helno wadar eber ah, waxaan ku sharad geli doonnaa masaafada +1, sida -2 +1 +1 = 0.
Isla markaaba ka dib masaafada -3 waxay soo bixi doontaa laba jeer oo isku xigta, sidaa darteed wax khamaar naguma dhici lahayn, sidaas oo kalena hadhow, sida taxanaha -3 -2, ma lihin masaafo + 5 aan higsanno.
Kulankaan tusaalaha ah ganacsadaha ayaa sidaas darteed nooga tagaya lacag caddaan ah oo firfircoon oo ah 60 gogo '(36 + 36 -12 gogo' oo labada sharad ah).
Sida iska cad si aan kuugu fahmo habka waxaan si fiican u qaatay isku xigxiga, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa in ifafaalaha wareegyada gaagaaban (iyo kalfadhiga hal ganacsade uu yahay) uu yahay mid soo noqnoqda oo ku filan baashaal la'aan walwal badan.
Faahfaahin dheeraad ah kama bixin doono qaabkan koowaad maxaa yeelay waa mid aad u fudud oo kahor inta aan ciyaarin waxaan kugu martiqaadayaa inaad sameyso baaritaanno badan.
Habka # 2: Ugaadhsiga qaabka micro
Codsigan labaad ee barnaamijka wuxuu ku lug leeyahay raadinta waxa loogu yeero 'micro pattern'.
Qaabka kiiskayagu waa shaxan, qaab ama qaab la qeexay, sidaa darteed ujeedada noocani waa in la garto oo lagu sharaddeeyo ku celcelinta dabeecadaha qaarkood roulette (ama croupier).
Aynu isla markiiba aragno shaxanka uu soo saaray ganacsadaha inta lagu gudajiro kulan dhab ah oo lagu ciyaaro qamaarka internetka.
Sida iska cad isha aan khibrad lahayn uma yeelan karto inay si sax ah u aragto waxa aan arko:
4 jeer fogaanta -2 ayaa baxday, seddex jeer isla markiiba masaafada -1 soo baxday, 5 jeer fogaanta -3 ayaa baxday, seddex jeer isla markiiba way baxday masaafada -2. Xaq xiiso leh?
Xusuusnow hal shay oo muhiim ah: tani waxay khuseysaa oo keliya kal-fadhiga keliya ee Croupier ee aan ku raad joogno waqtigaas gaarka ah.
Waqtiga fog in Croupier (ama giraangirtaas) ay soo saari doonto si sax ah dhammaan taxanaha la saadaaliyay ee heer istaatistik ah, sidaa darteed uruurinta boqolaal wareeg oo ah Croupier la siiyay ka dibna la raadinayo wixii leexasho ah (masaafada diiran ama qabow) wax macno ah ma samaynayso, runti waxay noqon kartaa jimicsi wanaagsan, laakiin ha rajeynin inaad hesho ganacsade gacantiisa cilladaysan (gacanta u xaglinaya), maadaama oo lozengesyadu aysan halkaas ku imaanin fursadna waana caadi in sidaas ay tahay.
Anigu geli maayo mudnaanta ay leedahay dhaqaajinta maaliyadeed ee aan kula dhaqmayo qaabkan, shaqsiyan waxaan jecelahay inaan ku ciyaaro lacagta bangiga, sidaa darteed anigoo ka bilaabaya miisaska ugu yar waxaan ciyaari lahaa horumar guul ah oo gaadhaya ilaa laba garaac oo si tartiib ah kordhiya qiimaha halbeegga.
Waxaan u maleynayaa in qaabku yahay mid fudud, si kastaba ha noqotee aad ayey muhiim u tahay in isha loo isticmaalo si isla markiiba loo aqoonsado 'qaababka micro' (micro maxaa yeelay waxay ka kooban yihiin kaliya 2 dhibcood), si aan loo lumin xitaa mid ka mid ah fursadaha kalfadhi kasta had iyo jeer waxay bixisaa.
Dhamaadka sharraxaadda habkan labaad, halkan waxaa ku yaal garaaf kale (had iyo jeer laga soo qaado fadhiga dhabta ah ee dabcan) oo lagu muujiyey wareegyada midabada leh ee aan ku qeexay qaababka micro: isku midabku wuxuu u muuqdaa mid u dhigma isla qaybta (qaabka).
Habka # 3: Calaamadaha Isku-dhafan
Kuwa soo socdaa waa fekerkeyga sida ugu fiican ee barnaamijka loo isticmaalo.
Way kafiican tahay maxaa yeelay waa mida suuragal u ogolaaneysa, hadii Croupier uu yahay midka saxda ah, inuu yeesho faa iidooyin aad u badan markaad ugaarsato seddex darbo oo guuleysata oo isku xigta adoo mar labaad sharad ku sameynaya wax walba oo tallaalka xiga ah.
Maskaxda ku hay in guusha 3 hits oo isku xigta ay ka dhigan tahay inaad ku guuleysato 1.296 unug (waxaad ku sharadaysaa cutubyada 1-6-36 lambar kasta) iyadoo macaashkeedu yahay 215 jeer sharadka ugu horreeya, waxay la mid tahay inaad casino ku gasho 100 euro oo aad uga tagto 21.500!
Waa hagaag, runtii ma sahlana, laakiin sida aan gadaal ka arki doonno kala duwanaanshahan, oo bixinaya suurtagalnimada in si dhab ah loo helo guulo la taaban karo, waa in loo adeegsadaa si dhexdhexaad ah: waxay la mid tahay in lagu kaxeeyo baaskiil lagu tartamo iyadoo had iyo jeer la wado hal mooto, marka laga reebo farxadda hore. , haa. runtii way dhaawici kartaa!
Ok anigu ma rabin inaan kaa nixiyo, waa casuumaad culus oo ah inaad ka taxaddarto, maxaa yeelay, sidaad adigu naftaada u arki doontid, halkan waxaad ku samayn kartaa dhaawac halis ah naadiyada.
Qaabku waa kan: qaybaha garaafyada iskudhafan ayaa la raadiyaa, iyadoo la raadinayo 'astaamaha makro', sidaa darteed mar dambe uma sii ahaato qaabkii hore, qaybo ka mid ah kaliya 2 dhibcood (micro), laakiin qaabab soo noqnoqod dheer ayaa la raadiyaa.
Kahor intaadan arkin garaafyada qaar, hase yeeshe, way fiicantahay in lagu cadaadiyo waxa loola jeedo isku ekaanshaha joomatari: waxaa jira laba nooc oo isku eg, axial symmetry iyo dhexe iskudhaf.
Midka hore marka loo eego xariiq toosan, oo loo yaqaan dhidibka isweydaarsiga, kan labaadna marka loo eego hal dhibic, oo lagu magacaabo xarunta dhabanada.
Sideed ku aqoonsan kartaa shaxan isku eg marka loo eego xariiq ama dhibic?
Dhidibka isweydaarsigu waa xariiq toosan oo jajabeysa jaantus laba qaybood oo isla eg, kuwaas oo si dhammaystiran loo dulmarin karo.
Saddexagalka isle'eg wuxuu qirayaa seddex faasas oo iskumar ah, saddexagal aan isle'egayn isosceles wuxuu qirayaa oo keliya dhidibka isle'eg: dhererka la xiriira salka; isosceles trapezoid wuxuu qirayaa kaliya hal dhidibka isweydaarsiga, oo ah dhidibka saldhigyadiisa.
Iyada oo qaabkan aan ku shaqeyneyno waxaan raadineynaa jajabyada kala dambaynta ee qalalaasaha ka dhashay si kadis ah.
Sida aan arki doonno waqti yar, kaliya seddex nooc oo shax ah ayaa daruuri lagu sameyn karaa garaafyada: saddexagalka, trapezoids iyo, guud ahaan, qaybaha iyo jajabka qaybaha iyo qaababka kala duwan.
Markaa nooca symmetry-ka aan xiiseyneyno ayaa ah kan ugu horreeya oo keliya, taasi waa isweydaarsiga axial.
Waa kuwan garaafyada duubista dhabta ah si aad sifiican ugu fahanto waxa aan ka hadlayno:
Jaantuska muuqaalka ah, waxaan ku sawiray khad cagaaran qaar ka mid ah faasaska isweydaarsiga (runti sidoo kale waxaa jira kuwa kale) ee tirooyinka joomatari ee la sameeyay, bal aan taxno:
isosceles trapezoid oo salka yar ku leh kore;
jaantus / sadar saddex qodob ah;
saddexagalka isosceles oo leh cirifka xagga sare;
jaantus afar dhibcood ah (waxay u egtahay zeta jilicsan).
Sidaa darteed, haddii aan doonayo inaan higsado xiritaanka shaxanka qaabeysan, waan ciyaaray:
Sawirka 1: fogaanta -2 ka dib bixitaanka seddex ka mid ah afarta qodob ee isku soo koobay, ie -2 +2 +2;
Sawirka 2: fogaanta +2 kadib bixitaanka masaafada +2 +2;
Sawirka 3: fogaanta -3 kadib bixitaanka masaafada -3-1;
Sawirka 4: fogaanta -2 ka dib bixitaanka masaafada -2 +2;
Sawirka 5: fogaanta -2 ka dib bixitaanka saddexda masaafo -2 -3 -1;
Sidaad u aragto, garaafkan waxaa ka buuxa tirooyin isku dheelitiran oo si ula kac ah uma aan tusin saddexagalka isosceles oo leh cirifka hoose oo ku yaal isla markiiba trapezium-ka iyo qaybta saddexda dhibcood ee isla markiiba kor u kacaya ka dib sawirka 3.
Dhammaan tirooyinka la taxay (marka laga reebo lambar 5) waa kuwa ugu badan ee soo noqnoqda waxaadna hubaal ka heli doontaa iyaga ku dhowaad garaaf walba.
Aynu hadda eegno qaar ka mid ah iskumid adag
Jaantuska lagu soo koobay lambarka 1, xarriiqda masaafada -2 waxay u kacaysaa laba meelood si ay u kala fogaato +1, ka dibna waxay u dhaadhacdaa masaafada -1 waxayna u kacdaa sida saxda ah laba boos si loo fogaado +2
Xaaladdan oo kale, ka dib masaafada -2 iyo +1 ee labada qodob ee ugu horreeya, qaab muuqaal ah ayaa lagu sameeyaa barta +2.
Maskaxda ku hay in masaafada -2 illaa fogaanta +1 ay jiraan laba boos oo keliya xitaa haddii ay u dhigmaan saddex waji oo ku jira garaafka, maxaa yeelay khadka eber marwalba waa mid aan khusayn, tani waxay wax yar ka beddeleysaa garaafka, laakiin waa ku filan tahay fahmaan sida wax loo tiriyo.
Jaantuska labaad waa fududahay in la fahmo in isku ekaanshaha lagu sameeyay barta afaraad iyadoo lagu celcelinayo fogaanta +2.
Jaantuska seddexaad, dhanka kale, wuxuu leeyahay qaabsocodkan qaab dhismeedka: wuxuu kabilaabanayaa masaafada +1 wuxuuna hoos udhigaa hal meel masaafad -1 (xusuusnow waxa hada la yiri erayga eber), kadib dib ayuu ugulaabanayaa masaafada +3 iyo ka dibna mar labaad hoos ugu dhaadhaco midba midka kale. booska ilaa fogaanta +2.
Feejignaan: habkan ciyaarta waa in gabi ahaanba aan lagu isticmaalin qadka internetka ee ay maamusho softiweerka, nXitaa ha isku dayin inaad u isticmaasho barnaamijyada ka hortagga barnaamijyada, sida hababka adduunka oo dhan, ee looga soo horjeedo barnaamijyada difaaca kaliya ee aan la ciyaari karin ama noqon karin maamule khamaarka.
Taabadalkeed, u isticmaal roulettes tooska ah ee tooska ah, halkaas oo croupier dhab ah uu tuuro kubada, kaliya ka taxaddar inaad ka fogaato roulettes-ka halka kubad aad u fudud loo isticmaalo, taas oo mar uun ku dhacday inta u dhexeysa sanduuqyada kala duwan, boodboodyo duurjoog ah ka hor intaanay iskeed dhamaysan.
Haddii aad u maleyneyso in qaababka makro ay yihiin ifafaalooyin naadir ah, halkan waxaa ku yaal tusaalooyin kale oo ka mid ah fadhiyada tooska ah.
Hagaag, ma doonayo inaan sii wado waxaanan rajaynayaa inaan si dhammaystiran u dhammaystiray suurtagalnimada qaabkan cusub ee muuqaalka ah ee ciyaarta roulette.
Waxaan si cad ugu talinayaa taxaddarka ugu sarreeya iyo wixii ka sarreeya waxaan kugu martiqaadayaa, ka hor inta aanad bilaabin inaad si dhab ah u sharraxdo, inaad naftaada u tababarto si dhakhso leh u barato inaad aqoonsato qaababka micro iyo macro ee koox kasta oo croupier ah ay soo saarto inta lagu gudajiro.
Taasi waa intaas hadda, wixii taageero ah ee aad u baahato sidaad ogtahay inaan had iyo jeer kuugu jiro gacantaada viafoomka xiriirka.
Soo Degso Fayl	DSTracker.zip - 4 MB
Istaraatijiyad sharad ku saabsan natiijada qayb ahaan / ugu dambaysa